Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy | 33
2006-09-12 @ 07:42 in Izaho sy ny ahy
Na dia tsy tena tiako loatra aza Superman (mihoatra amin'i Batman sy Spiderman) dia nijery ihany sao dia tsy mahalala izay fantatry ny olona. Anisan'ny film malaza amin'izao fotoana izao mantsy ka ilaina ihany ny mba afaka mandray anjara rehefa mitantara ny olona. Mazava ho azy, amin'ny maha Superman azy dia zavatra tsy azo eritreretina mihitsy no mitranga... izay no itiavako an'i Batman satria farafaharatsiny hita hoe misy zavatra azo tanterahina.
Nanaitra ahy tao amin'ilay film koa ilay detail kely momba an'ilay vitesse. Satria haingana noho ny feo i Superman rehefa manidina dia mandalo an'ilay mur du son izy, tahaka an'ireny fiaramanidina mpiady mandalo mur du son ireny... dia misy an'ilay arc kely.
Nanaitra ihany koa ny tsy nisian'ny scene de sex tao anatin'ilay izy na dia indray mandeha aza. Ary tsy nifanoroka akory izy sy i Lois Lane
Amin'ny ankapobeny dia nahazo tsikera tsara io horonantsary io.
Azonao jerena eto ny mombamomba an'ilay film.
2006-09-04 @ 13:49 in Izaho sy ny ahy
Androany aho dia mba liana nijery ny fomba fiasan'ny ao amin'ny meebo.com izay fitaovana ampiasaiko matetika... ka inoako fa be mpampiasa koa. Dia nahita ireo fitsinjaran'asa mirindra isaky ny fahaiza-manaon'ny tsirairay. Marina, mikarama angamba ry zareo ireo, afatsy ireo izay manao internship, fa na izany aza dia ekipa miara-mikahondoha tokoa. Manaporofo izany rahateo ny filazan'izy ireo azy ato.
Inoako fa misy gasy efa manao toa izany koa, angamba ry zalahy sites ngezangeza ireo. Fa mety ho azo atao ho an'ny serasera ve izany? Betsaka ihany mantsy ny malagasy "mivangongo" ato. Mety ho afaka hiara-miasa araka ny fahaiza-manaony. Betsaka rahateo ny zavatra azo atao. Raha misy vonona dia milazà ihany e.
Isaorana be dia be aloha ireo izay efa manampy eny antsefatsefany eny.
Fihaonan'ny namana serasera tao Paris
2006-08-23 @ 09:26 in Izaho sy ny ahy
Dia tsy maintsy hitohy ihany ity fihaonana ity. Taorian'ny fihaonana teto Roma tamin'ny 3-6 aogositra 2006 teo dia indro indray nidodododo nandeha tany Paris fa nisy fihaonana nokarakarain'i Maina indray tany.
2006-07-18 @ 02:08 in Izaho sy ny ahy
Vokatry ny fifankatiavana misy ao amin'ny serasera.org dia aty avaratr'i Lafrantsa indray izahay amin'izao fotoana izao. Tsy nisalasala nandray anay i sipagasy namana maharitra sy mpiara-mandrindra ao amin'ny serasera.org ihany koa.
Ianareo ry frantsay
2006-07-16 @ 02:53 in Izaho sy ny ahy
Marina fa tsy voalohany nandalovako teto Frantsa tamin'ity indray mitoraka ity fa niova mihitsy ny fomba fijeriko sy ny fihevitro momba an'i Frantsa sy ny Frantsay taorian'iny lalàna Sarkouzy iny. Na eny andalana rehetra eny aho dia toa tsy mijery tanàna intsony fa manjary miezaka mijery ny tebiteby eny amin'ny endriky ny olona. Rehefa mandeha metro dia toa hitako izany ny tahotra ao ambadiky ny tsikin'ireo olona hafa loko... indrindra rehefa ilay hivoaka misy polisy iny. Tsy milamina intsony e. (tohiny)
«Mialoha 1 2 3 ... 28 29 30 31 32 33 34 Manaraka»